downloads 15 641
Emelitere na 31 / 08 / 2018Ihe nlere: 3D ghọrọ nke ndi ala FSX na Prepar3D Ọkpụkpọ v4, mepụtara "eserese nkịtị" ederede (ụyọkọ) ederede, v10.5 nrụnye, mmezi nke ọtụtụ nsogbu ọhụhụ, mmezi nke ihe atụ nke 3D, gbakwunyere na-atọ ụtọ nke ọnụ ụzọ na ọnọdụ VC.
Nke a version e mere maka FSX & P3D, Ibudata a version dakọtara na FS2004 pịa ebe a
Ekele Joel Soler, onyeisi ndị Arc-en-Ciel ime ihe na ya ahuhu nke ụgbọ elu, na French Red-Cross-enye ụmụaka nwere nkwarụ na ndị okenye ohere na-achọpụta na ọṅụ nke na-efe efe n'ụgbọ ihe Icarus C-42 Ultra-Ìhè.
Arc-en-Ciel mgbaru ọsọ dị welie nwere nke ọ bụla onye na. Ọ dabeere karịsịa gosiri ya na-arụsi ọrụ otu egwuregwu: 70% nke Arc-en-Ciel si akwọ ụgbọelu nọ n'ọnọdụ nke handicap (ntị ochichi, paraplegia ..)
Ọ bụ na ịnụ ọkụ n'obi na anyị ji obi ụtọ gwa ya Rikoooo si (www.Rikoooo.com) Mmekorita ya na Arc-en-Ciel!
Mr. Erik Bender, Onye Okike nke maara nke ọma "Rikoooo" website maka ụgbọelu na ụgbọ elu ịme anwansị ndị hụrụ, na Mr. Thomas Guiart n'afọ ofufo nara anyị arịrịọ na-kere kpọmkwem repaint nke C42 Ikarus, mma na Red-Cross 'mbinye aka na agba. Na-ekelekwa ka Mr. Byron WARWICK n'ihi na 3D nlereanya.
Site na nbudata n'efu nke enyere na weebụsaịtị, onye ọ bụla nwere ike iji otu na naanị Red-Cross 'Ikarus nwee ahụmịhe dị n'ịntanetị nke pụrụ iche na Flight Simulator 2004 na Flight Simulator X® (nke Microsoft® na Prepar3D v1 na v2® nke Lockheed Martin®).
Site na nke a ediomi na French Red Cross chọrọ agbasa ya ntinye kwupụta nwere nkwarụ, na-adọta ndị mmadụ n'ebe Arc-En-Ciel si akpata; na n'ikpeazụ ga-ahụ haziri nzukọ ike iji nwee ume ime.
N'ihi na Red-Cross '150th ncheta, Rikoooo na Arc-en-Ciel si otu na-enye gị na-abịa niile n'ụgbọ na-aga n'ihu nzukọ ndisịn idem ke Aviation na akụkọ banyere ya. Kpọmkwem otu narị afọ gara aga, Red-Cross 'enyemaka e nyere ndị agha na WW1 ekele ya ofufe gbaa ọsọ.
Red-Cross "ọrụ Arc en Ciel" na Partership na Rikoooo
Bara uru njikọ: Page Facebook ọrụ Arc en Ciel
Pịa na ihe oyiyi ka enlarge
Ladd-on : Abịa complet avec kokpiiti virtuel, gauges et umu personnalisés
Onye edemede: Byron Warwick. FSX/P3D ntụgharị nke ala & nwughari & ịzigharị Rikoooo.com